कांग्रेसले अब के गर्छ ? प्रवक्ता भन्छन्- जन्ती लिएर आउँछौं ! - www.kchhakhabar.com
कांग्रेसले अब के गर्छ ? प्रवक्ता भन्छन्- जन्ती लिएर आउँछौं !
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन १६, २०७५ समय: १५:३०:४२
यसो हुन्छ नै भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ । तर, यो रवैयाको हामी विरोध गर्छौं ।